कति बढ्यो शिक्षकको तलब ? दर्जा अनुसार फरक–फरक [सूचीसहित] – Jaljala Online
कति बढ्यो शिक्षकको तलब ? दर्जा अनुसार फरक–फरक [सूचीसहित]
जेठ १८, काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत शिक्षकको तलब वृद्धि गरेको छ ।
यो खबर नारायण अर्यालले लोकान्तरमा लेखेका छन् । प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको तलब दर्जा अनुसार १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
जेठ ८, काठमाडौँ । वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने लोकप्रिय नारा अघि सारेको नेकपा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बाचा गरिसकेको छ । वृद्धभत्ता बढाउने तयारी छ । तर, बढ्दो चालु खर्च, प्रदेश र स्थानीय तहमा थप रकम पठाउनु पर्ने दबावमा रहेको सरकारका लागि यो सजिलो पनि छैन । नेकपा सांसदसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री […]